China S11-M-2500/10 Atọ na-adọ n'ụzọ zuru ezu anọkwasị mmanụ imikpu nkesa ike transformer emepụta na suppliers |Shengte
S11-M-2500/10 Atọ na-adọ n'ụzọ zuru ezu anọkwasị mmanụ imikpu nkesa ike transformer
The iron isi nke S11-M usoro obere ọnwụ na-azọpụta ike mgbanwe nke ụlọ ọrụ anyị na-anakwere laminated Ọdịdị.
Ngwaahịa a na-adabere n'ụzọ zuru ezu na-amịkọrọ nkà na ụzụ dị elu na usoro nke ụlọ mmanụ na-emikpu transformer, jikọtara ya na nkà na ụzụ larịị nke ụlọ ọrụ anyị, na-etinye ntụkwasị obi nke ngwaahịa na mbụ, n'otu oge ahụ, enweghị ibu ọnwụ na ọ dịghị. - Ibu ugbu a nke ngwaahịa na-ebelata nke ukwuu.
1. Igwe mmiri na-anabata usoro ike mkpụmkpụ mkpụmkpụ dị ala.Mgbe ihe ntụgharị ahụ dị mkpụmkpụ, ọ nwere ike ibelata ike mkpụmkpụ nke axial ma mee ka ikike nke iguzogide obere okirikiri dịkwuo mma.
2. All bolts na nuts na mkpuchi elu na-mere nke 304 igwe anaghị agba nchara, nke enhances ike mgbochi nchara nke transformer.
3. Ihe mgbanaka rọba nke ọ bụla na-emechi ihe kacha mma na China, bụ nke na-agbatị ndụ ọrụ nke mgbanaka roba.
4. The transformer body adopter a high-reliability support structability iji hụ na mkpakọ a pụrụ ịdabere na ya nke elu na akụkụ ala nke eriri igwe.Ọdịdị ahụ dum na-eme ka ikike nke iguzogide obere oge.
5. Nke a ọ bụghị nanị na-ebelata nkwụsị na-enweghị ibu nke onye na-agbanwe agbanwe, ma na-eme ka ọ pụta ìhè na isi ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị agwụ agwụ mgbe onye na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ n'okpuru voltaji, nke mere na harmonic nke atọ nke ihe ntụgharị ahụ dị ntakịrị.
Nke gara aga: S11-M-3150/10 Onye na-eme mgbanwe mmanụ na-emikpu ọla kọpa / Aluminom 10KV 11KV Ihe ngbanwe nke okpukpu atọ dị elu dị ala nkesa ike.
Osote: S11-M-2000/10 n'ụzọ zuru ezu mechie mmanụ-mikpuru ike transformer elu-ala voltaji nkesa ike transformer